BAWINILE NGCOBO | Abahlali baseMjondolo
Category Archives: BAWINILE NGCOBO
Isolezwe: Kushone izingane kusha imijondolo
January 8 2014 at 11:06am
BASALE dengwane kusha imijondolo yabo esigamekweni okushone kuso izingane ezimbili zandawonye eGermany, eLamontville, izolo entathakusa.
Abantu ababalelwa ku-60 basale bengenamakhaya ngesikhathi kusha imijondolo engaphezulu kuka-20 .
Izolo abantu abebehlala kule ndawo bebeqoqene ngenhla kwemijondolo yabo eshile behlezi nezimpahla ezincane abakwaze ukuzikhipha.
This entry was posted in BAWINILE NGCOBO, umlilo, Zulu on January 11, 2014 by Abahlali.
Isolezwe: Kulwe izithandani kwasha imijondolo
Kulwe izithandani kwasha imijondolo
INGXABANO phakathi kwezithandani kuthiwa yiyo eholele ekusheni kwemijondolo elinganiselwa kweyikhulu kuKennedy Road eThekwini izolo entathakusa.
Ngokuthola kweSolezwe, owesifazane ohlala kule ndawo ubethi uyobheka isoka lakhe ngesikhathi efica ukuthi linomunye wesifazane.
Kuthiwa ube esevalela isoka ngaphakathi, walanda upharafini endlini yakhe wawuvuvuzela ngaphandle walayitha ediniwe.
Kuthiwa lo wesilisa ukwazile ukuphuma emjondolo wakhe wabe esethinta amaphoyisa.
Okhulumela amaphoyisa, uSuperintendent Vincent Mdunge, uthe ngesikhathi amaphoyisa kaMasipala naweSAPS efika kule ndawo amalungu omphakathi awajikijele ngamatshe, kwalimala amaphoyisa amabili akwa-Metro.
“Ngesikhathi kunokujikijela kusolakala ukuthi kukhona abanye abokhele umlilo kweminye imijondolo nokudale ukuthi umlilo ubhebhetheke. Owesimame uthathiwe ukuze aphoswe imibuzo,” kusho uMdunge.
Izolo emini abantu bakule ndawo bese beqalile ukuvusa imijondolo yabo ngamapula-ngwe abebehamba bewacosha kwezinye izindawo.
Bekukhala isipikili abantu beqongqotha izinkethe ezi-shile bezama ukuziqondisa.
UNksz Thombi Mkhwanazi uthe ubezilalele ngezithuba zehora lesibili entathakusa izolo ngesikhathi ezwa abantu bememeza bebanga umsindo bekhala ngomlilo oshayo.
Umengameli wenhlangano yaBahlali Basemjodolo, uMnuz Sbu Zikode, uthe ba-ngaphezu kwenkulungwane abantu abasale dengwane.
UZikode uthe akazi lutho ngamaphoyisa alinyaziwe.
“Ngazi ukuthi abantu bebefuna ukumudla bamfele lo sisi okuthiwa ubezama ukushisa isoka lakhe. Amaphoyisa azame ukumvi-kela kwaba nesixakaxaka,” kusho uZikode.
This entry was posted in BAWINILE NGCOBO, fire, Zulu on June 17, 2009 by Abahlali_3.
Isolezwe: Balale emnyango ababethenjiswe izindlu zomxhaso
Balale emnyango ababethenjiswe izindlu zomxhaso
March 20, 2009 Edition 1
KUXABENE ubendle ezindlini ezingamathini eziseRichmond Farm ngaseLindelani njengoba ngoLwesibili kube khona abantu abakhishwayo kulezi zindlu balala emnyango, kwafakwa abanye abakhishwe emijondolo eseSiyanda lapho kwakhiwa khona umgwaqo onguthelawayeka.
NgoLwesibili abantu abese besele emijondolo yaseSiyanda bathuthelwe kulezi zindlu ukuze balindele ukungena izindlini zabo zomxhaso, kodwa bahlangabezana nembibizane ngesikhathi befika sekukhona asebehlala kuzo okungaziwa ukuthi bangena kanjani.
Abanye balaba bantu bathi bakhokha imali engu-R3 000 komunye wabasebenzi bekomidi elinikezela ngalezi zindlu ukuze bathole okhiye, kodwa akekho onento ebhalwe phansi ekhombisa ukuthi bakhokha.
Abanye bathi basuswa eSiyanda kwa-B ngoDisemba kwathiwa bazohlala kulezi zindlu izinyanga ezintathu bese bethuthelwa ezindlini zabo.
Ingu-16 imindeni elale emnyango ngoLwesibili emuva kokuthi befice izimpahla zabo sezisemnyango, ngoba sekufakwe abanye abantu.
UMnuz Molefe Manake (70), obebukeka esadidekile, uthe yena nomndeni wakhe balale emnyango kanti abazi nokuthi bazoshonaphi.
UManaka uthe balethwa yimoto ebusuku ngonyaka odlule kule ndawo bakhokha nemali.
UMnuz Joseph Chiliza uthe wakhokha u-R3 000 komunye amgagule ngegama nathe usebenza ehhovisi eligcina okhiye balezi zindlu.
“Ngivula ngokhiye engawunikwa emuva kokuthi ngikhiphe imali. Okusho ukuthi sasidlala umuntu njengoba sesingondingasithebeni namhlanje,” kusho uChiliza.
UNksz Thandeka Khathi uthe wasuswa eSiyanda kwa-B ngoDisemba kwathiwa bazoquba kule ndawo okwesikhashana.
“Angikhokhanga mali ukuze ngingene kule ndlu. Ngilove ngisho emsebenzini ngoba ngoLwesibili ngafika izimpahla sezisemnyango sekufakwe abanye abantu,” kuchaza uNksz Khathi.
UNksz Thembi Zungu ongeniswe endlini uthe balethwe kule ndawo ukuze bazolindela izindlu zabo.
Lokhu kulandela ukuthi emasontweni amabili edlule iNkantolo eNkulu yaseThekwini ikhiphe isinqumo sokuthi Abahlali baseMjondolo baseSiyanda abethenjiswa izindlu kodwa bagcina bengazitholanga bafakwe ezindlini zamathini okwesikhashana bese benikwa izindlu zomxhaso kube kuqhubeka uphenyo lokuthi bangena kanjani abantu abangaziwa ezindlini okwakufanele bangene kuzo.
Imizamo yokuthola okhulumela uMnyango wezeZindlu ngaphansi kukaMasipala weTheku, uMnuz Nigel Gumede, ayiphumelelanga.
This entry was posted in BAWINILE NGCOBO, corruption, evictions, siyanda, transit camps on March 20, 2009 by Abahlali_3.